ဒီစာအုပ်ကတော့ သံလုံငယ် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . တစ်ခါတည်း ပေါင်းစည်းမိသွားအောင်လို့ ကျွန်တော်တင်ပေး လိုက်တာပါ .. Photoshop ကိုလဲ လေ့လာပါ . အခုပေးလိုက်တဲ့ Photo impact ကိုလဲ လေ့လာပါ . software တိုင်းမှာ လုပ်ငန်းချင်းတူညီကြပေမယ့် . အမြဲတမ်း အားနည်းချက် အားသာချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ် ....
Download ကို အဆင်ပြေတဲ့ link ကသာ Download လုပ်ကြပါ အဆင်မပြေရင်လဲပြောပေါ့ . မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါ့မယ် .. :)